Fingotra Products Vulcanizing Tank - China Qingdao milina tapaka
Product Application fingotra vokatra vulcanizing tanky no tena ampiasaina nanasitrana ny fingotra vulcanization vokatra. Ny vokatra mety ho fingotra fingotra tariby, kiraro fingotra, fingotra Hose, fingotra-roller, adhesive kasety, fingotra fehin-kibo, fingotra rano stopper, baolina fingotra, fingotra soson'ny, antitra kodiarana retread, Nanavotra fingotra desulphurization sy SBR thermoplastic resin; manohitra ny harafesiny, anti-deformation impregnation fitsaboana, sakafo sy fanafody nentim-paharazana Shinoa mba hanafoanana (hamono) bakteria, kofehy, volo, Soc ...
Supply Fahaizana: 10 Sets isam-bolana
Fingotra vokatra vulcanizing tanky no tena ampiasaina nanasitrana ny fingotra vulcanization vokatra. Ny vokatra mety ho fingotra fingotra tariby, kiraro fingotra, fingotra Hose, fingotra-roller, adhesive kasety, fingotra fehin-kibo, fingotra rano stopper, baolina fingotra, fingotra soson'ny, antitra kodiarana retread, Nanavotra fingotra desulphurization sy SBR thermoplastic resin; manohitra ny harafesiny, anti-deformation impregnation fitsaboana, sakafo sy nentim-paharazana sinoa fitsaboana hanafoana (hamono) bakteria, kofehy, volo, ba kiraro hafanana fitsaratsaram-poana, sorona zoro sy taolana avo-tsindry fanovana, degreasing, hydrolysis ny isan-karazany volony, aliminioma entana oxidation. Koa fitaovana ampiasaina amin'ny karbonina, asbestos friction fitaovana, gypsum sy ny vokatra, ary ny fitaovana hafa autoclave, mahandro sakafo, mandroboka, paharitry. Ny tapany faharoa amin'ny famolavolana foto-kevitra momba ny fantsona fingotra vulcanizing tanky. 1, ny fingotra vulcanizer olombelona! (Na aiza na aiza hakingan-tsaina, ny olona maneho-mirona famolavolana) 2, filaminana! (Araka: GB150-2011 "tsindry sambo orinasa mpamokatra entana fenitra", ISO9001: 2008 rafitra fanamarinana kalitao, ny fiarovana ny sakafo HACCP fanamarinana famolavolana, fanamboarana) 3, ny fingotra vulcanizer dia azo antoka! (Fifantenana ny izao tontolo izao-malaza marika faritra,) 4, ny fingotra dia angovo vulcanizer famonjena! (Temperature very, herinaratra, rivotra Compressed, efatra andro fihinanana ny antonony, amin'ny Optimization) 5, fingotra Vulcanizer no fijery tsara tarehy, tantara, voalamina tsara, tsotra! Ny fizarana fahatelo amin'ity fantsona fingotra vulcanizing tanky famolavolana, orinasa mpamokatra entana fototra Products mifanaraka tsara ny "fahaizana fitsipika" sy GB150-98, GB151-98 fitsipika pirenena fanekena orinasa mpamokatra entana, sy ny fiantohana ara-teknika vaovao Documentation mivadika.
Masontsivana ara-teknika ny fantsona fingotra vulcanizing tanky.
nanasitrana tanky savaivony / Tube halavan'ny / 1500 fahafahana feno MG / 3000mm / 5.3m3
Design tsindry 1.0Mpa
ny ambony indrindra dia 0.8Mpa miasa tsindry
Ny mari-pana ambony indrindra fandidiana ny 180 ℃
Total nametraka herin'ny momba 64KW
Power famatsian malefaka 380V
Pot vatana ara-nofo Q345
hatevin'ny rindrina vatana ny fiara 12mm
Boky 4200 * 1700 * 2000
lanjan'ny ny 3 taonina
Fizarana 6 nanasitrana tanky ancillary foto-drafitrasa (mpampiasa-nanana)
Air compressor Fofonaina: 0.6m3 / min
Fizarana 7: Toetra mampiavaka ny fitoeran-tsoliky vulcanization
◆ herinaratra mandeha ho azy fanaraha-maso ,
◆ elektronika, aforeto-mekanika fiarovana malefaka.
◆ mekanika fiarovana rojo.
◆ elektronika fanitsiana mari-pana fahadisoan-dàlana.
◆ elektronika-mari-pana ny fiarovana mandeha ho azy.
Manjary mafana ◆ fanairana.
◆ herinaratra fanaraha-maso ny fifandraisana tsindry
◆ mandeha ho azy etona silencer kanonta.
◆ hafanana maha samy hafa ny hevitra ao am-bilany (hafanana fizarana) ± 0,5 ℃.
◆ tsaina fanaraha-maso ny hafanana, araka ny marina ao anatin'ny fanaraha-maso ny mari-pana ± 0,5 ℃.
Fingotra vokatra, toy ny fingotra, vulcanization, Nanavotra fingotra desulfurization, SBR thermoplastic plastika; volotsangana carbonization degreasing, fingotra, fingotra, fingotra, fingotra, Wood afo, kalalao, manohitra ny harafesiny, anti-deformation impregnation, sakafo sy fanafody eny format manan-tompo Shinoa (hamonoanao) bakteria.
Previous: Stainless Steel Food Industrial vilany
Manaraka: Wood Timber Anticorrosive Treatment Tank
autoclave milina fingotra fanasitranana efi-trano
Carbonization Autoclave Wood fa mamono otrikaretina izy Tank
mafana rano mangotraka tanky
fingotra autoclave vulcanizer
fingotra fanasitranana autoclave
fingotra fanasitranana afaka
fingotra fanasitranana tanky
fingotra fanasitranana tanky milina
fingotra Hose fanasitranana sambo
fingotra vulcanization autoclave
fingotra vulcanizing afaka
fingotra vulcanizing tanky
hazo anticorrosive tanky
hazo mahandro tanky
hazo impregnation tanky
hazo fanovana tanky
hazo fitsaboana tanky
Voankazo sy legioma manasa Processing Machin ...